Ithegi: unxibelelwano | Martech Zone
Ezona Zixhobo zibini ziSebenzayo zeSiphumo seB2B sokuKhokelela
NgoMvulo, Juni 15, 2020 NgoMvulo, Juni 15, 2020 Madhavi Vaidya
Khetha uvelwano lwabathengi kunye namava abathengi njengesixhobo esibalulekileyo sesicwangciso sakho kwaye usenokuba sele ufumene isiqwenga esilahlekileyo ngoku esinokugqibezela iphazili yesizukulwana!
Ukuthengisa nge-Apple: Izifundo ezili-10 onokuzifaka kwiShishini lakho
NgoMvulo, Novemba 19, 2018 Douglas Karr
Abahlobo bam bayathanda ukundinika ixesha elinzima lokuba ngumlandeli we-Apple. Ndinokubeka ityala ngokunyanisekileyo kuyo yonke into kumhlobo olungileyo, uBill Dawson, owandithengela isixhobo sam sokuqala seApple- iAppleTV… wandula ke wasebenza nam kwinkampani apho sasingabaphathi bemveliso bokuqala ukusebenzisa iiMacBook Pros. Kudala ndingumlandeli ukusukela ngoku kwaye, ngaphandle kweKhaya lasekhaya kunye neSikhululo senqwelomoya, ndinaso sonke isixhobo esinye.
Kutheni uMartech esiQhinga sokuQiniseka kokuKhula kweShishini
NgoMvulo, Juni 12, 2017 UDan Purvis
Itekhnoloji yentengiso ibinyukile kule minyaka ilishumi idlulileyo, singasathethi ke ngeminyaka. Ukuba awukamamkeli uMartech okwangoku, kwaye usebenza kwintengiso (okanye kwintengiso, ngaloo nto), ke kungcono ungene ebhodini ngaphambi kokuba ushiye ngasemva! Itekhnoloji entsha yokuthengisa inike amashishini amathuba okwakha amaphulo okuthengisa anempembelelo kwaye anokulinganiswa, ahlalutye idatha yokuthengisa ngexesha lokwenyani, kunye nokuzenzekelayo kwintengiso ukuqhuba uguquko, imveliso kunye ne-ROI up, ngelixa unciphisa iindleko, ixesha kunye nokungasebenzi.
Ubugcisa kunye neNzululwazi yeNtengiso yeKhontenti
NgoMvulo, Juni 23, 2014 NgeCawa, uJuni 22, 2014 Douglas Karr
Ngelixa uninzi lwezinto esizibhalela iinkampani zisiqwenga sobunkokeli, siphendula imibuzo ebuzwa rhoqo, kunye namabali abathengi - olunye uhlobo lomxholo lubonakala. Nokuba yiposti yebhlog, i-infographic, iphepha elimhlophe okanye ividiyo, owona mxholo uqhuba kakuhle uxela ibali elichazwe okanye eliboniswe kakuhle, kwaye lixhaswe luphando. Le infographic evela kwi-Kapost inyanzela ngokwenyani eyona nto isebenza kakuhle kwaye ngumzekelo omhle… wokudityaniswa kobugcisa
Uzifumana njani iindlela ezintsha zokuthengisa
NgoLwesibini, Januwari 21, 2014 NgoLwesibini, Januwari 21, 2014 USavannah Marie
"Yayiyindawo epholileyo ukuchitha ixesha kude kube wonke umntu eqala ukuya apho." Esi sisikhalazo esiqhelekileyo phakathi kwehipsters. Abathengisi babelana ngokukhathazeka kwabo; Oko kukuthi, ukuba ubeka igama elithi "kupholile" ufake igama "elinenzuzo" Ijelo lokuthengisa elikhulu linokuphulukana nokukhanya kwalo ekuhambeni kwexesha. Abathengisi abatsha bathatha ingqalelo kude nomyalezo wakho. Ukunyuka kweendleko kwenza ukuba utyalomali lube lungenisi mali ingako. Abasebenzisi abaqhelekileyo bayadika kwaye badlulele kumadlelo aluhlaza. Ukugcina